Bavale umgwaqo befuna imali ka-NSFAS | News24
Bavale umgwaqo befuna imali ka-NSFAS
isithombe: lethiwe makhanyaAbafundi base-Unisa bavale umgwaqo bebhikisha ngoMsombuluko.
ABAFUNDI base-University of South Africa (Unisa) esigcemeni esiseMgungundlovu bavale umgwaqo uLangalibalele Street ngoMsombuluko mhla zingama-30 kuNtulikazi (July) nalapho bekhale ngokuthi isikhwama esikhokhela abafundi u-National Student Financial Aid System (NSFAS) asibakhokhelile izimali ze-semester yesibili.
Laba bafundi baphazamise ukuhamba kwezimoto kulo mgwaqo njengoba ugcine usuvaliwe.
Basola u-NSFAS ngokungabakhokheli izimali zabo ukuze bekwazi ukubhalisa beqhubeke nokufunda kule-semester.
Usekela nobhala wesigungu esimele abafundi (SRC) e-Unisa eMgungundlovu uMnuz Khetha Mthethwa uthe bakhazekile ngokwenziwa u-NSFAS ngoba ukubhalisa kwabafundi bekuvalwa ngawo uMsombuluko.
Uthe emasontweni amabili edlule bathumele uhlu lwezikhalo zabo kubaphathi benyuvezi sokuthi bafuna abafundi bebhaliswe noma bengenayo imali yokukhokha ngoba inyuvezi iyazi ukuthi u-NSFAS awukabakhokheli nokuthi ukubhalisa kwabafundi bekuvalwa ngoMsombuluko mhla zingama-30 kuNtulikazi.
“Sibhekene nenkinga yabafundi okwathiwa abenze izifundo ze-higher certificate ku-Abet njengenxenye yesitebhiso abazokwazi ukungena ngaso ukuze bekwazi izifundo zobuthishela.
“Labo bafundi abasakwazi manje ukubhalisa ngoba inyuvesi isizikhiphile lezifundo abasazi ukuthi kumele benze njani.
“Singabafundi sithi sekwanele sikhathele ukudlala inyuvesi.
“Inyuvesi isilalela uma siteleka kuphela. Sifuna ukuthi inyuvesi iphendule uhlu lwezikhalo zethu iphinde ihlehlise usuku lokuvala ukubhalisa kwabafundi ngoba bayazi ukuthi abafundi abakhokheliwe,” kubeka yena.
Uthe uma kunwukuthi akuhlangatshezwana ngezidingo zabo bazovala zonke izigceme zokufunda kwale nyuvesi bese bemashele ePitoli njengoba bake benza naphambilini.
Uveze ukuthi udaba lwemali nokubhaliswa kwabafundi akulona oluyinkinga kuphela kulenyuvesi njengoba nezinsiza kusebenza ziyinkinga kule nyuvesi okwenza kube nzima kubafundi ukuthi benze umsebenzi wabo bewuqede ngesikhathi.
Omunye umfundi obeyingxenye yesiteleka uNomfundo Ndlovu okhulume ne-Echo uthe akazi ukuthi uzokwenzenjani njengoba kuvalwa ukubhalisa bengakhokheliwe.
“Shuthi impilo izoma i-semester yonke uma kungukuthi inyuvesi ayilunwebi usuku lokuvalwa.
“Bayazi ukuthi asikhokheliwe, bathi siyithathephi -ke imali? Ngikhathazekile ngoba lokhu kusho ukuthi ngizohlala ekhaya uma ngingabhalisi ngesikhathi,” kubeka yena.
Omunye wabafundi ukhale ngokuthi inyuvesi ayibacabangeli ikakhulukazi uma kuza kwizinsiza zokusebenza.
“Uma kumele wenze umsebenzi kumele ubambe ulayini omude wokwenza ama-copy nje kuphela futhi abanendaba nathi.”
Kuze kwashaya isikhathi sokushicilela bengaphenduli abe nyuvesi nabe-NSFAS .